IBulltech Ukubonelela ngoshicilelo lwe-3D ngobuchwephesha be-SLM kunye ne-SLA
I-Bulltech ijolise ekuboneleleni ngesisombululo esimileyo kunye nesisisombululo se-3D, ukunceda abasebenzisi ukuba baphumeze uyilo olufanelekileyo, ukunciphisa iindleko zemveliso, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokwenza ixabiso.
Products ngentando yakho
Inkonzo yokuPrinta ye-3D enye
Izinto kunye nezixhobo
Ukuchongwa kweMigangatho ekuMgangatho
IBulltech ibonelela ngezixhobo zokuprinta ze-SLM kunye ne-SLA kunye nezixhobo kubandakanya iTitanium kunye neTitanium Alloy, iSuperalloy, iCopper kunye neCopper Alloy, i-Stainless Steel, isixhobo seTungsten Alloy njl njl, kunye nezinto zeResin zemibala eyahlukeneyo.
Ibandakanya ubuchwepheshe be-SLM kunye ne-SLA. Ngaphezulu kwezinto ezingama-60 ezinokuprintwa, ubungakanani bokushicilela ukuya kuthi ga kwi-500mm * 400mm * 800mm (SLM) kunye ne-1600mm * 800mm * 600mm (SLA).
Sibonelela ngeenkonzo zokuqhutywa kwemisebenzi yonke kubandakanya ukusika i-Wire, ipolishing, ukugqiba iMachining, unyango lobushushu njl.
Sinikezela ngohlalutyo lobume beKhemikhali, uhlalutyo lweepropathi zoomatshini, uhlalutyo lweepropathi zomzimba kunye nolwakhiwo oluncinci lwezixhobo zentsimbi. Uvavanyo lwejometri kunye novavanyo olungenakonakala lwamalungu.
Ngokwimfuno zabathengi, sinikezela ngovavanyo kunye nokuqinisekiswa kwe-ISO, iNadcap yokuQinisekiswa kwezinto ezine, i-CNAS okanye iingxelo zokuhlola ezivela kwi-SGS, BV njl.
IBakala1 (BT1-00), iBanga5 (BT6), iBanga23 (BT6C), iBT3-1, iBT9, iTi17, iBT22, i-Cti-62222S, iTi-811, BT20, iTi-6242S
IAlsi12, AlSi10mg, AlSi7mg, AlSi9cu3 ， AIMg4. 5Mn04
I-Aermet 100, 300M, 30CrMnSiA, 40CrMnSiMoVA
ICopper kunye neCopper Alloys